Ancient Egypt. zita rimwe nyika ino chete ndiyo pfungwa chakavanzika uye chirabwe, chakavanzika uye mumwe mashiripiti. Kubva kumucheto uku renguva inoyerera Nile kunosanganisira zvakawanda ngano, zvakavanzika uye adventures. Ndiani asina vaida kuwana maoko avo pamusoro kunozivikanwa pfuma vanaFarao? Ndiani asina anzwa chituko nevatongi wehurumende ichi? Ndiani asina akarota kanenge kamwe hwose kushanyira paucheche yebudiriro hwevanhu, uye kuti kubata rusvingo, izvo akagogodza muEgipita tsamba kuvake? Zvichida vanhu ava havana kuwana, nokuti pano ibwe ose rwoga rwoga nhoroondo. Uye chidimbu ose anokwanisa kufamba panguva apo vanhu vainamata vanamwari misoro mhuka.
Culture Mumupata murwizi
nyika iyi yakasiyana chaizvo nemamwe mararamiro ekare, mungano kwayo, dzematongerwe, chitendero netsika. Just dzinosiyana munzvimbo kuvake tsamba veIjipiti kubva tsamba zvenyika yekare, Fenikiya, Mesopotamia. Kusvikira ikozvino, masayendisiti kunetseka wemapoka akakura mapiramidhi vechokwadi. Isu, vagere remakore maviri okutanga, zvinoita sokuti musoro kuvaka guva kuti vanaFarao. Uyewo, zviri kujeka kuti chii chinangwa vagere Nile mumupata rakacherwa pabwe sphinx - a vakatsenhama shumba ine musoro yevanhu. Tinoziva zvakawanda pamusoro tsika yavaEgipita, muprista pamwero okukura sayenzi, nezvenyeredzi, mushonga, injiniya. Asi panguva imwe chete tine vadzidzisi zvuru gumi mibvunzo usati yapindurwa.
High tsika munyika akabvunza kukura kunyora. Zvino Mumupata murwizi mumireniyamu rechina BC. Pakutanga, mumwe tsamba yomuIjipiti Icon of vakaratidza midziyo, vamire pamusoro. Somuenzaniso, zuva vanoratidzwa denderedzwa ane dot pakati, mvura - vashoma Wavy mitsetse uye zvichingodaro. Asi zvakaoma kuratidza mufananidzo zita mwari kana Farao. Naizvozvo, vaIjipiti vakawana - ivo vaiita shoko mabhii uye vakasarudzwa nokuda mumwe dzakasiyana hunhu mashoko. Somuenzaniso, kana munhu aifanira kunyora shoko zviyo (Peret), rokutanga mabhii akanga muEgipita kunyora mufananidzo inotaridza musha (pa).
Zvinofanira kucherechedzwa kuti hurongwa chaizvo kunzwisisa, saka nevanyori vainakidzwa rukudzo inokosha paruvazhe vanaFarao. Asi ichi vakanga refu uye zvakaoma kudzidza.
Sezvambotaurwa, muEgipita tsamba kuvake zita riri nyore - chimiro uye wegadziriro inonzi yekare. Zvino tinoda kutsanangura kuti vakashandisa vagari Mukuru Hapi nyika rokusika mabhuku avo. Tsamba akagogodza matombo uye matombo pamadziro temberi, nhare uye pamakuva, pamusoro zvehari, edare, emapuranga ndiro, kanivhasi. Asi vakawanda acho aiva enhokwe, izvo akakura pamahombekombe erwizi chitsvene.
Kuti agadzirire jira "pepa" shamhu akacheka lengthwise huviri kumativi uye delaminated. rinoparadza vakanga ipapo wakadiridzwa uye dzine ukapisa murwi patafura neimwe kuitira. Next, unofanira noruvara vomanikidza dura dombo kana kumativi chimuti - saka Stavan homogeneous, monolithic uye hunogara. Kana dzaomeswa, nhokwe rakanga rakakodzera kushandiswa pakunyora mubhizimisi. Vakashandisa rutsanga seinä uye anokosha inks jira rwuchipeterwa uye yakasungirirwa pamwe thread. mabhanzi izvi zvinogona kuchengetwa kwenguva refu pasina kurasikirwa mashoko anokosha. Kuti vari masayendisiti Pavaichera.
Chii kuita vatambi
Mubvunzo unokosha Ndokusaka pane muIjipiti tsamba kuvake. MuIjipiti yekare yakanyorwa kwete chete ezvoupfumi mari Somuenzaniso, sei varanda vazhinji vaivapowo kuvaka, vangani uye rudzii zvokudya vakapiwa, sei mari zhinji inobhadharwa ichi kana zvimwe zvinhu. With vatambi vari akavezwa pamabwe, vanhu vakauya isu tariro dzavo uye zvinotarisirwa, akataura pamusoro nezvavanotenda pamusoro kushungurudzika wemufi munhu. Panewo zvechokwadi mabhuku mabasa, rengano, umhare nengano kunyika kure, pamusoro nekurwadziwa zvevanhuwo zvavo. Kazhinji, vanochera matongo vakawana zvinhu zvakanyorwa kuti verenga pamusoro utsinye zvakaipa uye kusaruramisira, vanomanikidzwa kutsungirira varombo vanhu vakakwirira. Asi vazhinji vacho yakanyorwa nziyo kuna vanamwari, zvido wemufi, nziyo wakabatsira mweya kupinda humwe upenyu.
Zvinokosha kucherechedza kuti nyika dzokuMadokero kwenguva refu havana kuziva kuti zvinorevei tsamba neimwe muEgipita kuvake. Mhinduro yomubvunzo uyu akawanikwa gare gare, pashure ushe Napoleon Bonaparte. Young uye unyanzvi mutungamiri nemauto, ane chidhori akanga Alexander Mukuru aida kukunda nyika. Notes naye akatora vasayendisiti uye vemifananidzo, vatsvakurudzi uye vanyori venhau dzakaitika. Saka Europe ane kuzivana tsika yeIjipiti. Ipapo yakawanikwa ari Rosetta Stone, izvo zvakabatsira Jean Champollion, kupenya nyanzvi mitauro yekare, kukanganisika chakavanzika yekare. Makore basa rakaoma - uye vakafa vakatanga kutaura matombo kubva panguva yakare! Zvino munhu wose anogona vakazvimiririra kuverenga chisinganzwisisike tsamba.
Assembly pasi Peter 1. Assembly Petro. Culture pasi Peter 1
Nei Lenin asina kuvigwa pakarepo pashure porufu? Maererano nevanyori venhau dzakaitika
The French Kujekerwa
Hetman - chiratidzo muUkraine
Kusvetuka tambo: chii tsandanyama vari kushanda zvikuru? Izvo tsandanyama vari swinging kana kusvetuka tambo
Asherman kuti chirwere: zvinokonzera, zviratidzo, description, kuongorora chirwere uye kurapwa
Recipe mupunga Paper makazara zvakasiyana madhishi mana
Vietnam guta: chikuru, yakaisvonaka, uyai
Aripiko shongwe kuna Valenza musicians? Fairy-ngano mabhii pasi pose
Oleg Almazov: Biography uye basa
Retinol acetate (capsules): mirayiridzo kushandiswa uye wongororo
Zvakaita nzwara resitorendi "panguva Bhishopi Mukuru wacho madziva (Moscow)
Sei chamber motokari yako smartphone wako